Lernia oo iskuul SFI ka furaysa Vällingby | Somaliska
Lernia oo iskuul SFI ka furaysa Vällingby
Iskuulka caanka ah ee Lernia ayaa bishaan November waxay xaafada Vällingby ee ka tirsan Stockholm ka furi doonaan iskuul cusub oo lagu barto luuqada SFI (Svenska för invandrare). Macalimiinta iskuulka cusub wax ka dhigi doona ayaa sheegay in ardada ku soo biirta iskuulka cusub ay yihiin kuwo ka qeyb qaadan doona horumarka iskuulka.
“Waxaan aaminsanahay in iskuulka cusub ay soo dhaweyn doonaan dadka ku nool deegaanka Vällingby iyo agagaarkeeda. Waxaan xooga saaraynaa in aan waxbarasho tayo leh ka bixino halka ay ku noolyihiin ardadeena. Waxaa caadi ah in ardada qaar ay shaqeeyaan ama caruur u joogaan iyaga oo luuqada barta. Waxaan fahansanahay in u dhawaashaha deegaanka, shaqada, iskuulka ay muhiim u tahay ardada oo waxaan doonaynaa in aan baahidaas buuxino. “ Ayuu yiri Antonio Fermin Acosta oo ah agaasimaha Lernia ee qeybta SFI-ga.
Si ardada xiisaynaysa iskuulka ay warbixin u helaan ayuu iskuulku qaban doonaan kulan furan maalin-walba saacadaha 9-16. Adreeska waa är Krossgatan 32 i Vällingby. Qofka doonaya in uu waxbarasho ka bilaabo iskuulka cusub ee laga furayo Vällingby ayay waajib ku tahay in uu taggo xarunta Sfi-centrum ee ku taala Hornsgatan 124.
Mowduucaan waxaa suurto galiyay Lernia!
waxaan maqlay schoolkan in uu fiicanyahay inkasto waxbarashadu dadaalka qofka ku xidhan tahay hadana dadbadan o amaanayaan arkay dadka somalida ah in ay so dhaweyan waxna ka bartan ayan rajenaya